iMovie Formats, ihe i nwere ike Import na Export
Gịnị Formats Pụrụ iMovie Export on iPhone / iPad ma ọ bụ Mac
Gịnị Formats Pụrụ iMovie Import si Mac ma ọ bụ iPhone / iPad
iMovie bụ ebe ọ bụ na a mgbe now na a na-akwado na ma Mac kọmputa na iDevices, N'ezie na dị iche iche faịlụ extensions. iMovie - dị ka ịrụ ọrụ nke ọma video nchịkọta akụkọ nke Apple ngwaọrụ - enye gị ohere dezie ọkacha mmasị gị na obere vidiyo ka kwa na mmasị gị. Otú ọ dị, o nwere ụfọdụ na-agaghị emeli mgbe ọ na-abịa faịlụ formats na ọ na-akwado iji mee ka ha maka na ị dezie.
Ọ bụ ezie na iMovie nwere dị iche iche echichi faịlụ maka Mac na iDevices, na-akwado video formats maka ma na kọmputa na mobile ngwaọrụ ndị fọrọ nke nta otu, ma dị iche iche na ihuenyo amuma. Nke a pụtara, n'ihi na Mac kọmputa, na ihuenyo mkpebi nke videos tupu ma ọ bụ mgbe edezi pụrụ ịnọgide na-ruo 1080p ma a ala mkpebi ga-achọrọ maka iPhones ma ọ bụ iPads dabere na ihe nlereanya nke ndị a na ngwaọrụ.
Ebe ị ga-ahụ nke faịlụ formats na-akwado iMovie mgbe dị na exported ma ọ bụ site a Mac kọmputa ma ọ bụ ihe iDevice.
Nkebi nke 1: Gịnị Formats Pụrụ iMovie Export on iPhone / iPad ma ọ bụ Mac
• MP4 (MPEG-4) - Nke a bụ ihe kasị mma video format na a na-akwado iMovie, Mac, ma ọ bụ ndị ọzọ Apple ngwaọrụ. Otu MP4 faịlụ nwere ike exported ka Mac kọmputa ma ọ bụ iPhone / iPad na-egwuri na gị họọrọ video ọkpụkpọ. Ị nwere ike mbupụ gị videos ka MP4 iji nweta obere faịlụ size enweghị adịkwa ha mma.
• MOV (QuickTime Movie) - A video faịlụ Ọkpụkpọ-akwado site na ọtụtụ ndị ọzọ na nyiwe dị ka Windows, wdg MOV faịlụ nwere ike inwe ihe ndị ọzọ ozi dị ka ndepụta okwu, video mmetụta, akụkụ Akwụkwọ Nsọ, audio, wdg ka ogologo dị ka a MOV faịlụ anaghị nwere DivX codecs (nke bụ eleghi anya mgbe edezi faịlụ na iMovie), ọ nwere ike exported ka Mac ma ọ bụ onye iDevice na meghere ke ọkacha mmasị gị video ọkpụkpọ.
• AVI (Audio Video Interleave) - tọhapụrụ site Microsoft na ọnwa nke November 1992, AVI bụ nke atọ na-ewu ewu video faịlụ Ọkpụkpọ ugbu a. iMovie nwere ike mbupụ video faịlụ a format nke ike-eji na Mac kọmputa, iDevices, na ngwaọrụ na kọmputa si dị iche iche nyiwe.
• Image usoro - Ma ọzọ format iMovie nwere ike mbupụ video faịlụ ka. Otú ọ dị, nke a faịlụ Ọkpụkpọ na-adịghị mee na ọ bụghị dị ka ewu ewu n'etiti ndị ọrụ dị n'elu ka atọ bụ. Image usoro format na-akasị ji dị ka onye ọzọ ebe QuickTime ike-eji.
• DV - iMovie nwekwara ike exporting na faịlụ na dijitalụ video (DV) usoro. DV na-eji mgbe Ndekọ vidiyo na camcorders. Nwere ike ị chọrọ iji nke a na ụdị faịlụ mgbe video mmepụta àgwà ihe na faịlụ size adịghị.
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ndị ọzọ na faịlụ formats na iMovie nwere ike mbupụ ka Mac ma ọ bụ iPhone / iPad, ndị tụlere n'elu na-akacha eji site Apple Ngwa 'nwe ụwa.
Rịba ama: Nile n'elu formats na-dakọtara na iMovie iPhone na iPad tinyere Mac kọmputa. Nanị dị iche bụ na nke ihuenyo mkpebi nke video mmepụta nke ahụ nwere ike ma ọ bụ ghara-erughị na-anabata na kọmputa meziri. The mkpebi nke exported video na-adabere na size nke iDevice na nke ya bu n'obi na-eji. Dịka 4K video faịlụ-apụghị egwuri na okenye iPhones.
Nkebi nke 2: Gịnị Formats Pụrụ iMovie Import si Mac ma ọ bụ iPhone / iPad
Dị ka na exporting, n'agbanyeghị na e nwere ọtụtụ formats na iMovie nwere ike mbubata si a Mac kọmputa ma ọ bụ iPhone / iPad, ọ bụghị ha niile na-ewu ewu ma ọ bụ na-eji ọtụtụ n'ime ọrụ n'ụwa nile. Ole na ole ndị na-dị oké ọnụ ahịa na-ekwu banyere agụnye:
• DV - iMovie nwere ike mbubata DV faịlụ site na Mac kọmputa. Dị ka e kwuru n'elu, na DV faịlụ bụ camcorder dere vidio ndị na-nnukwu na size ma bụ oké elu na mma. DV faịlụ nwere ike dị ka iMovie, ghọrọ ka a dị iche iche họọrọ format, na mgbe ahụ exported azụ Mac ma ọ bụ iPhone dị ka ikpeazụ mmepụta ikiri.
• AIC (Apple Intermediate Codec) - Inye hà mmepụta àgwà dị ka nke DV, AIC, dị ka DV, enye gị ohere igosi ọzọ edezi ka video faịlụ n'emebighị ha mma. Ebe ọ bụ na AIC nwere fọrọ nke nta niile atụmatụ na uru nke DV, ọtụtụ ugboro ma na-kọwara n'okpuru a nkịtị ngalaba.
• MOV (QuickTime Movie) - Na mgbakwunye exporting gị video faịlụ ka .MOV iji iMovie, iMovie-enye gị ohere mbubata a faịlụ Ọkpụkpọ maka inwekwu edezi. Mgbe na-eme chọrọ mgbanwe faịlụ, ha nwere ike exported ma na .MOV ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ họọrọ format dị ka mkpa.
• AAC (Advanced Audio nzuzo) - iMovie nwekwara ike mbubata AAC faịlụ maka inwekwu edezi nzube. AAC, nke bụ ihe audio faịlụ Ọkpụkpọ awade nta file size na ụba ụda àgwà mgbe e jiri ya tụnyere MP3 faịlụ ụdị.
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ndị nkiri editọ Apple n'elu ikpo okwu na ọtụtụ n'ime ha bụ ọbụna free, iMovie awade kasị mma video edezi nhọrọ ma na-akwado dịgasị iche iche nke mbubata na mbupụ faịlụ formats. A na-eme ihe omume vasatail.
Ọzọkwa, n'ihi na iMovie dị maka ma Mac na iDevices, n'agbanyeghị ihe ngwaọrụ ị na-eji, ị ga-esi otu interface na anya ma na-eche, si otú eme ka ị kemgwucha ala mgbe edezi videos.
> Resource> iMovie> imovie format, gịnị ka ị pụrụ mbubata na mbupụ?